Steve Jobs Best Quotes • POINT
(1) The only way to do great work is to love what you do. If you haven’t found it, keep looking. Don’t settle.
ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ဖို့ တစ်ခုတည်းသော နည်းလမ်းကတော့ လက်ရှိကိုယ်လုပ်နေတဲ့အလုပ်ကို ချစ်မြတ်နိုးဖို့ပါပဲ။ အဲ့လိုအလုပ်မျိုး ရှာမတွေ့သေးဘူးဆိုရင် ဆက်လက်ရှာဖွေနေပါ။ ကိုယ်သဘောမကျတဲ့အလုပ်နဲ့ ဘဝကို အထိုင်မချလိုက်ပါနဲ့ . . . . .
(2) If I try my best and fail, well, i’ve tried my best.
အကောင်းဆုံးကြိုးစားပြီး ကျဆုံးရမယ်ဆိုရင်လည်း ကျွန်တော်ကတော့ အကောင်းတကာ့အကောင်းဆုံး ကြိုးစားနေခဲ့မှာပါပဲ။
(3) Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life.
မင်းဘဝက အချိန်အကန့်အသတ်နဲ့ အသက်ရှင်ရတာ။ ဒါ့ကြောင့် သူများဘဝထဲ ဝင်ရှုပ်ပြီး အချိန်မဖြုန်းမိပါစေနဲ့။
(4) Those who are crazy enough to think they can change the world usually do.
ကမ္ဘာကြီးကို ပြောင်းလဲနိုင်ရမယ်လို့ တစ်ထစ်ချယုံကြည်သူတွေကပဲ တကယ်ပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့ကြတာ။
(5) All I ask is that today, you do the best work of your entire life.
မင်းရှင်သန်နေတဲ့ “ယနေ့”တိုင်းမှာ ဘဝတစ်ခုလုံးရဲ့ အကောင်းမွန်ဆုံးအလုပ်တွေကိုသာလျှင် လုပ်ဆောင်ပါ။
မင်းဘဝက အချိန်အကန့်အသတ်နဲ့ အသက်ရှင်ရတာ။ ဒါ့ကြောင့် သူများဘဝထဲ ဝင်ရှုပ်ပြီး အချိန်မဖြုန်းမိပါစေနဲ့။